December 8, 2020 - Khitalin Media
သမီးဖြစ် ​သူ ရဲ့မင်္ဂလာ ဦးညဖြတ်သန်း ပုံ ကို အမေဖြစ် သူကြားပြီး သတိ လစ်
December 8, 2020 by Khitalin Media
သမီးဖြစ်သူ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအပြီးးးးး အမေဖြစ်​သူက “သမီး မင်္ဂလာဦးည ဘယ်လိုဖြစ်လဲ အမေ့ကို ပြောပြ.. ပြောရမှာ ရှက်ရင် စကားဝှက်သုံးပြီး စာပို့ လိုက်” ” ဟုတ် အမေ” နောက်ရက်ကျ သမီး ဆီကစာတစ်စောင် ဝင်လာတယ် “အမေ MAI-Yangon-Bangkok ပဲ” ဒဲ့ ။ အဲ့ဒါနဲ့အမေဖြစ်သူလည်း ဘာအဓိပ္ပါယ် ဆိုတာသိရအောင် MAI ရုံးကို ဖုန်းဆက်ပြီးမေးတယ်.. “MAI ရန်ကုန် ကနေ ဘန်ကောက်က လေယာဉ် အကြီးစားတွေ ဖြစ်ပြီး တစ်ရက် ၅ ကြောင်း ရှိပါတယ်။ တစ်ပါတ်မှာ ၇ ရက်လုံး နားရက် မရှိပါဖူး။ လေယဉ်တစ်ခါ ပြေးဆွဲချိန် ၄၅ မိနစ် ထိ ကြာပါတယ်။” လို့ MAI … Read more
သင့် ချစ်သူ သင့်လက်ကို ကိုင်တဲ့ ပုံစံကနေပြောနေတဲ့ သင့်တို့စုံတွဲအကြောင်း
ချစ်သူတိုင်းက ကိုယ်ချစ်ရသူရဲ့လက်ကိုကိုင်ပုံချင်းမတူတတ်ကြပါဘူး။ တချို့ စုတ်ကိုင်ထားတတ်တယ်။သင့်ချစ်သူ သင့်လက်ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိူးကိုင်လဲဆိုတာ ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးရွေးပေးပါ။ဒါမှ သင့်ချစ်သူ သင့်လက်ကို ကိုင်တဲ့ပုံစံကနေ သင့်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ရေးအကြောင်းကို သိနိုင်မှာပါ။ (1)လိုပုံစံ သင့်လက်ကို ကိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးက တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ယုံကြည်ကြတယ်။လက်သန်းလေးတွေ ချိတ်ကိုင်ထားတဲ့ပုံစံက ကတိပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလို့ သင့်ကို တစ်သက်လုံးချစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါ။ (2)လိုပုံစံနဲ့ သင်ချစ်သူက သင့်လက်ကို ကိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်တို့က တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယုံကြည်မူတွေနဲ့ လက်တွဲနေကြတာပဲဖြစ်တယ်။(၂)ရဲ့လက်ကိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးက နွေးထွေးတဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ဒီလက်ကိုင်ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင် သင့်တို့်အတွက် အပေါ်ယံတွေမလိုပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ချစ်ကြတယ်ဆိုတာသိနေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ (3)လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ သင့်ချစ်သူက သင့်ကို သစ္စာရှိရှိချစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ပဲဖြစ်တယ်။တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်လည်း လက်တွဲမဖြုတ်ချင်လောက်အောင် တစ်ယောက်လက် တစ်ယောက် စုတ်ကိုင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ သင့်လက်ကို ကိုင်ထားမယ့်ဆိုရင်တော့ သူသင့်ကို အရမ်းတစ်သက်လုံးချစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပဲဖြစ်တယ်။ (4)လိုပုံစံမျိုးနဲ့ သင့်လက်ညှိုးလေးတွေနဲ့ချိတ်ပြီး … Read more
အချစ်ရေး အဆင်မပြေဘူးဆို မကြာခဏ လုပ်ကြည့်ပါ။ ထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်။ တနင်္လာနံ သတ္တဝါလေးတွေကို အာဟာရဒါနပြုပါ။ ဌက်ကလေးတွေ၊ ခိုလေးတွေ ၊ငါးလေးတွေ ၊လမ်းဘေး ခွေးလေခွေးလွင့်လေးတွေကို အစာကျွေးပါ။ ကျွေးရမဲ့နေ့ကတော့ အင်္ဂါနေ့ သောကြာနေ့ စနေနေ့လေးတွေမှာကျွေးပေးပါ။စိတ်ထဲဘာမှဆုမတောင်းပါနဲ့။ သဒ္ဓါတရားထက်သန်စွာကျွေးရင်ရပါပြီ။ ရွေးပေးထားတဲ့နေ့တိုင်း မပျက်မကွက်ကျွေးရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ မိမိအားတဲ့နေ့မှကျွေးဖို့ပါပဲ။ အထက်ပါအစီအရင်တွေကို လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေတဲ့သူတိုင်း အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။ အဆင်ပြေနေတဲ့သူတွေက ချစ်ခြင်းတွေခိုင်မြဲမယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးအချစ်တွေ ဆထက်ပွားလာပါလိမ့်မယ်။ဒါ့အပြင် ငွေကြေးတွေပါ လာဘ်ရွှင်လာတာကို ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရပါလိမ့်မည်။ ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com) Credit:မနောမယဓါတ်နန်း Unicode အခဈြရေး အဆငျမပွဘေူးဆို မကွာခဏ လုပျကွညျ့ပါ။ ထူးခွားလာပါလိမျ့မယျ။ တနင်ျလာနံ သတ်တဝါလေးတှကေို အာဟာရဒါနပွုပါ။ ဌကျကလေးတှေ၊ ခိုလေးတှေ ၊ငါးလေးတှေ ၊လမျးဘေး ခှေးလခှေေးလှငျ့လေးတှကေို အစာကြှေးပါ။ ကြှေးရမဲ့နကေ့တော့ အင်ျဂါနေ့ သောကွာနေ့ … Read more
Facebook သုံးရင်ဒါတွေ သတိထားပြီး ရှောင်စေချင်ပါတယ်
“Facebook သုံးရင်ဒါတွေ သတိထားပြီး ရှောင်စေချင်ပါတယ်” (၁)ပုံတွေခဏခဏ မတင်ပါနဲ့ ပုံတွေ ခဏခဏတင်ရင် လူတစ်ချို့က ကိုယ့်ကို တစ်မျိုးမြင်လာ နိူင်ပြီး မလိုလား အပ်တဲ့ လူမှုရေးပြဿ နာ တွေ ကြုံလာ တတ်ပါ တယ်။ (၂)အပျော်သဘောနဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ status တွေသိပ် မတင်ပါနဲ့ Facebook ဆိုတာ များသော အားဖြင့် တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်မြင်ဖူးနေ တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ ခင်မင်နေခြင်းဖြစ်၍ လူတွေရဲ့စိတ်ကို ကိုယ်တင်တဲ့ ပို့စ်တွေ ကြည့်ပြီး တန်ဖိုး သတ်မှတ်နေကြ တာဖြစ်လို့ သတိထားစေ ချင်ပါ တယ်။ (၃)ကိုယ်ရေးတဲ့ comments တွေကို သတိထားပါ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အဆင့်အတန်း ဆိုတာ တစ်ခါတစ်ခါမှာ ပညာအရည်အချင်း ၊ ချောမောလှပမှုရာထူးစည်းစိမ်တွေ … Read more
( 76 )ချက်ထဲက သင်( 1 )ချက်လုပ်နိုင်ရင် မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်လို့ပါ…
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ရင်…76 ချက်ထဲက ဘယ်နှစ်ချက် သင် လုပ်နိုင်သလဲ ??? ၁။ facebook password ကို သူမကို ပြောပြပါ… ၂။ သူမကို မရက်စက်ပါနဲ့… ၃။ စိတ်ထိခိုက်အောင် မလုပ်ပါနဲ့… ၄။ သူမကို အနိုင်မကျင့်ပါနဲ့… ၅။ မညာပါနဲ့… ၆။ မရိုက်ပါနဲ့… ၇။ တစ်ခုခုနဲ့ ကောက်ပေါက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့.. ၈။ သူမဖုန်းကို မချပစ်ပါနဲ့…. ၉။ အသံကျယ်နဲ့အော်ပြီး သူမကို စကားမပြောပါနဲ့… ၁၀။ သူမ စိတ်မကောင်းဖြစ်အောင် မလုပ်ပါနဲ့… ၁၁။ သူမအတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မဲ့ အရာတွေ သူမနဲ့ အတူ မရှိပါစေနဲ့… ၁၂။ မလုပ်ချင်တဲ့ အရာကို အတင်းမခိုင်းပါနဲ့… ၁၃။ … Read more
ချစ်သူမရှိဘဲ တစ်ယောက်တည်းအနေကြာလာလို့ အထီးကျန်လာရင် ဒါကိုဖတ်ပါ
သင်ဟာ ချစ်သူရည်းစားမရှိလို့ ဘဝကြီးက အထီးကျန်ဆန်ပြီး စိတ်ဓာတ်တွေကျနေပြီဆိုရင် ဒီစာလေးကို ဖတ်ကိုဖတ်လိုက်ပါ။ Single ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အထီးကျန်ဆန်နေလို့ မလုပ်သင့်တာတွေမလုပ်မိအောင်၊ ဒီဘဝလေးကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချတတ်အောင်၊ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတုန်း လုပ်သင့်တဲ့အရာလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) မလောပါနဲ့ ရည်းစားတစ်ယောက်နဲ့ပြတ်ပြီး နောက်ထပ် ရည်းစားတစ်ယောက် ရကိုရရမယ်၊ ငါ ဒီအသက်အရွယ်ပဲ ရောက်နေပြီ ရည်းစားရကိုရရမယ်ဆိုပြီး လိုက်မရှာပါနဲ့။ တကယ်ရေစက်ပါရင် တစ်ယောက်အနားတစ်ယောက် အတင်းမလုပ်ယူဘဲ ရောက်လာမှာပါ။ ခပ်လောလောနဲ့ ရည်းစားလိုက်ရှာကာမှ wrong people တွေနဲ့တွေ့ပြီး အဆင်မပြေကာ ကိုယ်ပဲ စိတ်ထိခိုက်နေပါဦးမယ်။ All good things take time ပါပဲ။ ￼ (၂) တစ်ဖက်သားကို တွန်းအားမပေးပါနဲ့ အချစ်ဆိုတဲ့အရာဟာ လုပ်ယူလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်ကိုယ့်ကို စိတ်ဝင်စားလာအောင်၊ … Read more
“သောကြာသားသမီးလေးတွေရဲ့ သူမတူတဲ့ မွေးရာပါအားသာချက်တွေနဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက် (၁၀) မျိုး”
ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုရဲ့ ငါးရက်မြောက်နေ့မှာ မွေးဖွားတဲ့ သောကြာသားသမီးလေးတွေဟာ ဗီးနပ်စ်ဂြိုလ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သောကြာသားသမီးလေးတွေမှာ သူများနဲ့မတူတဲ့ အားသာချက်နဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီအားသာချက်တွေကိုသာ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချနိုင်ရင်တော့ အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာ မလွဲဧကန်ပါပဲ (၁) သောကြာသားသမီးလေးတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ လှပခြင်း၊ အချစ်နဲ့ သာယာခြင်းတွေကို ကိုယ်စားပြုကြပါတယ် (၂) သောကြာသားသမီးလေးတွေဟာ အဆို၊ ပန်းချီလိုမျိုး အနုပညာအလုပ်တွေကို အထူးခုံမင်နှစ်သက်သလို ထူးကဲတဲ့ပါရမီလည်း ပါလာတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ် (၃) သင်ဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အပြင် ဘဝကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြတ်သန်းတတ်သူပါ ဒါပေမယ့် အချစ်ရေးမှာတော့ အရမ်းကိုထိရှလွယ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ (၄) သောကြာသားသမီးလေးတွေဟာ စိတ်ခံစားချက်ပြင်းထန်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အလျောက် အသည်းကွဲတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို နာကျင်မှုတွေ ပေးသွားတဲ့အခါမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ပြန်ပြီး မကုစားနိုင်ကြပါဘူး (၅) သင်ဟာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆိုရင် သူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို … Read more
အိမ်က မိန်းမ ကိုကွာရှင်းပြီး နောက်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ ယောက်ျား ၁ ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ
အိမ်ထောင်ရှိရှိ မရှိရှိ ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ် ကျွန်တော့်ဇနီး ညစာပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့လက်ကို ကိုင်ပြီး ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ “မင်းကိုငါ ပြောစရာရှိတယ်” သူကတော့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထိုင်နေပြီး ညစာစားနေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာ နာကျင်မှုကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘယ်ကစပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဘာတွေ တွေးနေတယ် ဆိုတာကို သူ့ကိုပြောရမှာပါ။ ကျွန်တော် သူ့ကို ကွာရှင်းဖို့ ကိစ္စပေါ့။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ ကျွန်တော်စပြောခဲ့တယ်။ သူ့ကိုကြည့်ရတာတော့ ကျွန်တော့်စကားလုံးတွေ ကို စိတ်ပျက်နေပုံမတွေ့ရဘူး။ ကျွန်တော့်ကို နူးညံ့စွာပဲ မေးခဲ့ပါတယ်။ “ဘာကြောင့်လဲ” တဲ့။ သူ့မေးခွန်းကို မဖြေဘဲ စကားလွှဲလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ သူဒေါသထွက်သွားတယ်။ လက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ တူတွေကို လွှင့်ပစ်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုအော်တယ်။ “နင်ယောက်ကျားမဟုတ်ဘူးလား” အဲဒီညက ကျွန်တော်တို့ စကားမပြောဖြစ်ကြတော့ပါဘူး။ သူကတော့ ငိုပဲ ငိုနေခဲ့ပါတော့တယ်။ … Read more
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ပေါ်လာမယ် ဆိုတဲ့ တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ပေါ်လာမယ် ဆိုတဲ့ တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း ကိုဗစ်ရောဂါ ဒုတိယလှိုင်းကာလမှာ အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်တွင်းနေပြီး အပြင်ထွက်ဖို့ အကြောင်းပေါ်သည့်အခါတွင်လည်း အကာကွယ်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်၍ သွားလာကြစေချင်ပါသည်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ရလာဒ်ကို ဖြစ်စေပါသည်။ [ နိုင်ငံရပ်ဝန်းလုံးဆိုင်ရာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပေသည်။ ] Occult Arts Studio ကို အစဉ်အဆက် အားပေးနေကြသည့် ပရိသတ်များအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစတမ်းလေးကို စီစဉ်ပေးလိုက်ရပါသည်။ တစ်ပတ်စာဟောကိန်း နဲ့ ယတြာလေးပါ ပါတာမို့ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ [ တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္လာ ၊ အင်္ဂါ သားသမီးများ ရှယ်ပေးခြင်းဖြင့် တစ်ပတ်အတွင်း မျှော်လင့်ထားသော မျှော်လင့်ချက်များပြည့်ဝပြီး အနှောင့်အယှက် အတားအဆီးများစွာတို့သည် ပျက်စီးသွားပါလိမ့်မည်။ ဗုဒ္ဓဟူး ၊ … Read more